कुनै राजनीतिक नियुक्ति लिएको छैन : डा. आले
काठमाडौं । एनआरएनए युकेका उपाध्यक्ष डा. प्रेम आलेले आफू गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ‘बादल’को प्रमुख स्वकीय सचिवमा नियुक्त नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
आलेले गृहमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव प्रतिक थापा नै भएको बताउँदै हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षामा पिएचडी गरेका डा. आले गृहमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिवमा नियुक्त भएको भन्ने समाचारको उनले खण्डन गरेका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘म कुनै राजनीतिक पदमा नियक्त भएको छैन । माननीय गृहमन्त्रीका लागि जुन काम गरे पनि मैले नियुक्त नलिइकन, सरकारी सेवा सुबिधा नलिई, अवैतनिक रुपले विशुद्ध स्वयंसेवीको रुपमा गर्दैछु, गर्नेछु ।’ केही दिनअघि एक अनलाइन न्यूजमा आले गृहमन्त्रीको स्वकीय सचिवमा नियुक्त भएको समाचार छापिएको थियो ।
ब्रिटिश सेनामा ३० वर्ष काम गरेका डा. आले पछिल्लो समयमा सुरक्षा सम्बन्धि विषयमा कलम चलाउँदै आएका छन् । आफूले वैधानिक रुपले नियुक्त नलिए पनि गृहमन्त्री थापाको काममा भने सधै सहयोगी र स्वयंसेवीको रुपमा काम गर्ने आलेले स्पष्ट पारेका छन् ।
यस्तो छ डा. आलेको विज्ञप्ति
‘आज अनलाइन न्युजमा आएको खबरले म आश्चर्य चकित छु । कसरी एउटा पत्रिकाले लेखेको असत्य कुरा एकपछि अर्को पत्रिकाले लेख्दै, अनुमानको भरमा अलिकति थपथाप गर्दै सबै जनतालाई भ्रम छर्न ‘सफल’ हुन्छ भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरण हो ।
त्यसैले निम्न सत्य–तथ्य कुरा सबैको जानकारीका लागि प्रस्ट गर्न चाहन्छुः
१. प्रमुख स्वकीय सचिव प्रतिक थापाको विषयमा बाहिर आएको कुराहरु पनि अहिले मेरो विषयमा आएको कुराहरुजस्तै सबै असत्य हुन् । यो “पानी धमिलो बनाउने” बिरोधीहरुको कुटिल चाल मात्र हो ।
२. माननीय गृहमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव प्रतिक थापा नै हुन् ।
३. म कुनै राजनीतिक पदमा नियुक्त भएको छैन ।
४. माननीय गृहमन्त्रीको. लागि जुन काम गरे पनि मैले नियुक्त नलिइकन, सरकारी सेवा सुबिधा नलिई, अवैतनिक रुपले विशुद्ध स्वयंसेवीको रुपमा गर्दैछु, गर्नेछु ।
अबको बाँकी समय देश र जनताका लागि अर्पण गर्नेछु । जनताको सेवा गर्नका लागि पद, प्रतिष्ठा र पैसा लिन जरुरी छैन । गृहमन्त्रीको भ्रष्टाचार निर्मूल गरी सदाचार, समतामूलक समाज सिर्जना गर्ने दुरदृष्टिलाई सफल पार्न धेरै “प्रयास”हरुको एउटा प्रयास हुन चाहन्छु, बस् यत्ति ।
असत्य समाचार लेखेर ‘जनतालाई सबैभन्दा अघि समाचार दिए’ भन्ने होडबाजीमा लाग्नुभन्दा सत्य तथ्य बुझेर, विश्वासिलो समाचार लेखी आफ्नो पत्रिकाको छवि उच्च राख्न सबै पत्रकारलाई अनुरोध छ । र सबैलाई यस्ता भ्रमप्रति सचेत हुन पनि आग्रह गर्दछु ।’
Tagsगृहमन्त्री डा. प्रेम आले स्वकीय सचिव